Archive du 20180331
Olan’ny MICTSL - Toamasina Hiteraka korontana raha tsy voavaha haingana
Ny mpandraharaha no mamelona ny toekarena Malagasy ary ny 70%-n’ny entana miditra eto Madagasikara dia mandalo ao amin’ny seranan-tsambon’i Tomasina avokoa.
Vahoaka Malagasy Tratran’ny fampiesonana faobe
Tsy mety manaiky ho resy na hilavo lefona mora foana Rajaonarimampianina sy ny ekipany na efa manangasanga izao aza ny firodanana. Mandeha ny fampiesonana manara-penitra amin’ny alalan’ny vina « Fisandratana 2030 ».
Fifidianana 2018 Miandry fahagagana ny Malagasy
Eo anelanelan’ny 24 novambra sy 24 desambra no hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto amintsika, raha ny voafaritry ny lalàmpanorenana. 8 volana eo izany sisa hananantsika amin’ny fikarakarana sy fandaminana ny zava-drehetra satria ny 15 aprily izao no tokony hikatona tanteraka ny lisi-pifidianana.
Andry Rajoelina Voan’ny NOTAM
Ny olona tsy matanjaka sy milaza fa manana ny heriny kanefa tsy manana izany akory, dia miezaka mampiasa ny lalàna sy mpitandro ny filaminana, hoy i Andry Rajoelina,
Fandinihana ny lalàna hifehy ny fifidianana Mandany volam-panjakana kanefa hampikorontana avy eo
Nikaon-doha nandritra ny telo andro momba ny volavolan-dalana fehizoro hifehy ny fifidianana teny amin’ny hotely le Paon d’Or Maibahoaka Ivato ireo depiote mpomba ny fitondrana HVM.Fihetsika sy fomba fiasa nanaitra ihany hoe ao anatin’ny fivoriana tsy ara-potoana mbola tsy tapitra ve no mifampitaona any amina hotely ny olom-boafidy, fa hoe mivory hono.
Mba hono ho aho e..
Fofon-kelika ve misy manitra? Ary ny petak'orona ve mba maranitra? Misy maso ve ny fakantsary? Ny marina ve azo aharihary?
Sary sy horonantsary mamoafady Mbola hisy mpanao politika ho lasibatra …
Miha mahazo vahana tanteraka amin’izao ny famoahana sary mamoafady hoenti-manala baraka olona ambony, mpanao politika, mpandraharaha, mpanakanto …
Fandaniana amin’ny fetin’ny Paska Mihena hatrany ny tetibolan’ny isan-tokantrano
Mihamihena hatrany ny tetibola hampiasain’ny isan-tokantrano hiatrehana ny fety eto amintsika.
Fahapotehan’ny tontolo iainana Marefo indrindra i Madagasikara
Nisy ny atrikasam-pirenena momba ny tontolo iainana sy ny toetr’andro izay notontosain-dry zareo avy eo anivon’ny vondron’ireo tanora nanolo-tena hirotsaka ho amin’izany na ilay antsoina hoe Gasy youth up tetsy amin’ny Panorama Andrainarivo, omaly.
Fetin’ny Paska ao Antsirabe Vao mainka miavaka ny amin’ity
Anaty lanonan’ny paska tanteraka ny ao Antsirabe na dia nosantarina tamin’ny oram-baratra aza izany omaly. Isan-taona moa dia mivoatra sy miova hatrany ny endriky ny fankalazana satria hatramin'izay dia nanjaka tokana ny orinasa mpamokatra zava-pisotro iray ao an-toerana, amin'ny fanafanana ny fety.
Fitokanana ny biraon’ny CAF eto Madagasikara Antony tsy namelana ny filohan’ny tetezamita nankany Mahajanga ?
Tsy navela nankany Mahajanga ny filohan’ny tetezamita teo aloha Andry Rajoelina.
Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy Ravelomanantsoa Mamy Andriantiana Mampandroso ny fanarahan-dalàna eo amin’ny fanatanjahantena
Iray amin’ireo atleta namiratra indrindra teo amin’ny fiangaliana ny taranja basket-ball Malagasy, indrindra teo amin’ny tifi-davitra fony tsy mbola nisy « tirs à 3 points » ofisialy no vahinin’ny
Kitra - Ligue 1 Analamanga Montsan’ny Cosfa 6-0 ny ekipan’ny Mi-20
Tontosa ny alarobia teo ny andro faha-9 amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’ny Ligy 1 eto Analamanga amin’ny taranja baolina kitra.
Ny tantara tsy fanadino !
Fetin’ny paska isika izao, ka tokony hisy ny fitoniana eto amin’ny firenena, raha tena olonkendry sy mitsinjo ny vahoaka Malagasy sy hamela azy ireo hifety am-pitoniana ny mpitondra sy ny mpanao politika.
Lalana Anosivavaka Ambohimanarina Nanome tanana indray ny depiote Horace
Tsy nionona tamin’ny fanentsenana ireo lavaka be teo amin’ilay lalana Anosivavaka midina any amin’ny Soam eny Ambohimanarina nanomezany tanana ny fokonolona ny depiote TIM, Rasoanoromalala Horace, fa mbola nanolotra fasika sy vatokely ary ciment 15 lasaka indray ny tenany ny talata 27 martsa lasa teo hanamafisana “béton” an’io ampahan-dalana io.
Prescolaire ao Andohatapenaka II Tsy manana trano hianarana fa nandray traboina ny biraom-pokontany
Miisa 110, ireo ankizy eo anelanelan’ny telo ka hatramin’ny dimy taona, manovo fahalalana eo anivon’ny “prescolaire” ao amin’ny fokontany Andohatapenaka II.
Tatitry ny iraky ny FMI Mifanohitra amin’ny an’ny mpahay toekarena Malagasy
Nampahafantarina tetsy amin’ny minisiteran’ny vola sy ny fitantanam-bola Antaninarenina fa vita ny tomban’ezaky ny teknisianina avy amin’ny Tahirim-bola Iraisam-pirenena (FMI) izay notarihin’i Marshall Mills,
Fampandrosoana an’i Madagasikara Mbola misy ny manao ory hava-manana
Matroka ny tarehimarika ara-toekaren’i Madagasikara navoakan’ny Banky iraisam-pirenena ary voasokajy ho anisan’ny firenena tena marefo isika amin’ny lafiny maro.
Ady amin’ny tsy fandriampahalemana eny Besarety Nohamoraina ny fahafahan’ny olona mifandray an-telefaonina
Anisan’ny mbola voasokajy ho ao anatin’ny faritra mena amin’izao ny Faritr’i Besarety ao anatin’ny Boriborintany fahatelo. Ankoatra ny rano miakatra rehefa fotoam-pahavaratra izay mamono olona hatrany amin’ny ankapobeny dia mahazo vahana ihany koa ny tsy fandriampahalemana.
Nivoaka ny fonja sahady i Nônô vola sandoka rehefa nomen’ny fitsarana fahafahana vonjimaika. Io farany anefa, raha tsiahivina fohy, dia nitsoaka hatrany ary voatery namoahana didy fampisamborana sy fikarohana manerana ny nosy vao voasambotra.
Mpibodo tany resy teo amin’ny fitsarana Tsy niraharaha ny didy, hoy ireo mponina
Tany maherin’ny 3 ha no lasan’ny orinasan-tserasera iray any Salazamay Atsimo ao Toamasina na dia efa nahazo rariny tamin’ny Fitsarana aza ireo mponina nanajary ny tany efa an-taonany maro, araka ny fitarainan’ny solontenan’izy ireo, niakatra aty Antananarivo.
Gaboraraka eto Madagasikara Marefo ny fanaraha-maso ireo vahiny
Tafakatra 20 000 ny olona niova fo ka lasa jihadista any Frantsa, araka ny tatitra navoakan`ny sampandraharaha misahana ny fampihorohoroana na FSPRT ny volana aogositra lasa teo, raha am-polony monja izany tamin`ny 2014.